Amanqaku ka-AlexAnndra Ontra Martech Zone |
Amanqaku ngu UAlexandra Ontra
U-AlexAnndra Ontra ngumseki kunye nomongameli Qhuba, isisombululo solawulo lwamaxwebhu esifunwayo sokwenza intetho eguqukayo. IShufflrr esekwe kwiSixeko saseNew York nguvulindlela woLawulo lweeNtetho. Eyasungulwa ngo-2014 nguJames no-AlexAnndra Ontra, iqela lomntakwabo kunye neminyaka engaphezu kwe-30 yamava ekuphuhliseni isoftware yolawulo lwenkcazo, iShufflrr inceda iinkampani kunye nabasebenzisi ngabanye ukulawula, ukuhambisa kunye nokuhlaziya umxholo wabo wenkcazo, ukugcina ixesha nemali.
Iindlela ezi-4 zeQhinga loLawulo lweNgcaciso-okanye ukungabikho kwayo-lixesha lokuDlala, oovimba kunye neShishini
NgoLwesibini, nge-15 kaDisemba ngo-2015 NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2015 UAlexandra Ontra
Ungandinceda ndibeke le ntetho kunye? Intlanganiso yam iyure nje. Andisifumani isilayidi. Esi sisilayidi esingalunganga. $ #! * Leyo yeyona deck iphosakeleyo. Isandi esiqhelekileyo? Ke awusebenzisi iqhinga lolawulo lwenkcazo esebenzayo. Kwaye, ngenxa yoko, uphulukana nexesha, izibonelelo kwaye, ngaphezulu kwako konke, ishishini. Ulawulo lwentetho luqinisekisa ukuba umyalezo olungileyo uxelwe kwelona xesha libalulekileyo- xa umntu othengisayo ethetha no